FIKAMBANANA Lockheed Martin X-35B M47 FS2004 - Rikoooo
Downloads 17 746
Mpanoratra: Colin Thwaites et Claudio Mussner
Fighter Lockheed Martin X-35B_M4.7. Fiaramanidina VTOL toy ny Harrier. Ny rivotra dia mihodina mianavaratra. Hafaingana kely: 5 Kts. Avia miaraka amina iray. Vokatry ny setroka dia vita tsara. Tora-borona tsotra, fa tena tsara be ny modely. fahatsapana tsara amin'ny fomba ofisialy VTOL. Mila mahafantatra ny fomba fihazonana ny jiro ianao mba hitazonana azy. Mba hahafahan'ny milina VTOL modely (F8).
Tena tsara tokoa. Misaotra ny mpanoratra ny asa goavana!
Ny X-35 dia fiaramanidina fanandramana novokarin'i Lockheed Martin ho an'ny programa JSF: Joint Strike Fighter. Notendrena ho mpandresy tamin'ny Boeing X-32 izy. Tokony hiditra amin'ny famokarana eo ambanin'ny anarana F-35 Lightning II. Ny fisintonana fohy sy ny fandehanana mivantana dia ny singa manan-danja amin'io version io. Ny kitapo solosaina na ny fantson-java-manify toy ny AV-8 Harrier II dia nesorina. Fa kosa, ny X-35B dia manana mpankafy miorina tanteraka ao amin'ny rindranasa aft of the cockpit izay ampiasaina amin'ny fisintonana na fitsangantsanganana. Noforonin'i Lockheed Martin izy ary novolavolain'i Rolls-Royce tao anatin'ny fiaraha-miasa mitondra UK1.
Ary ny dipoavatra lehibe dia mihodina, ny mpankafy dia mifamatotra amin'ny tanjaka ara-tsetroka ambany indrindra amin'ny rivotra maina. Ny solika anatiny dia mihena amin'ny 6.35 taonina. Mihena ihany koa ny fampisehoana amin'ny ankapobeny, saingy ity no vidin'ny karama ho an'ny fiaramanidina STOVL.
Ny maotera koa dia manana tombony amin'ny fisintahan'ny rivotra mena ary mihamangatsiaka. Noho izany, tsy dia mampidi-doza ny fiaramanidina fiaramanidina fiaramanidina na fiaramanidina fiaramanidina manodidina ny fiaramanidina.
Ny fampisehoana mandresy lahatra dia nomena nandritra ny fitsapana farany tao amin'ny programa JSF. Ny X-35B dia nilahatra kely noho ny 170 m (500 metatra), nahatsikaritra fiaramanidina an-jatony ary nitodika ny tandindona2. Ity rafitra sarotra ity dia niasa tsara rehefa nosedraina. Zava-dehibe ny fandresena ny programa X-35 JSF.
Ny prototype X-35B (sy X-35A teo aloha) dia tranom-bakoka museum an'ny Udvar Hazy any akaikin'ny seranam-piaramanidina Dulles ao Virginia. (Wikipedia)
Lockheed Martin F-16 Ady Falcon menarana FS2004
Lockheed Martin F-16 Ady Falcon FS2004